Igumbi lesi-2 eMcheikha - I-Airbnb
Igumbi lesi-2 eMcheikha
Mcheikha, Mount Lebanon Governorate, Lebanon
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJoe
Indlu entle ezolileyo eyenziwe kumagumbi amaninzi kunye ne-cellars iminyaka eyi-100 + ubudala kwi-900 m ngaphezu kolwandle, ejikelezwe yindalo kunye nombono obanzi we-Lebanese panorama. Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into onokuthi uyifune, kunye nesidlo sangokuhlwa sicocekile, sijikelezwe ngendawo efanelekileyo yokudlala abantwana kunye nosuku lweBBQ.
Indawo yakhiwe ngasekupheleni kweminyaka yoo-1914 ngoko ke undwendwe luyakonwabela ukuhlala okwahlukileyo kwindawo yakudala neyesintu. Imizuzu eli-15 kude ngemoto ukusuka kwiklabhu yelizwe laseZaarour kunye nemithambeka yokutyibilika, imizuzu emi-5 kude ne-RPM yokukhwela. Ukuhamba intaba ujikeleze ilali ejikelezwe ngamaplanga ngumsebenzi olungileyo.
Iinduli ezikufutshane kunye nendalo zilungele ukuhamba kwasekuseni, i-terrace yangaphandle ifanelekile kwimini ye-barbecue kunye nosapho kunye nabahlobo kwaye unokuhlala uyigqiba ngesidlo sothando phantsi kokukhanya kwenyanga.
Businessman Male born in 1988 from Lebanon
Ndiya kufumaneka kuwo nawuphi na umbuzo okanye uncedo olufunwa lundwendwe imini yonke, kwaye ngoncedo lwam lobuqu kunye nobukho ndingaba sekhaya emva kwe-6: 00 PM.
Iilwimi: العربية, English, Français, Русский, Español